သင်တစ်ဦးဝယ်ယူစေခြင်းသို့မဟုတ်ဆိုဒ်မှတဆင့်ဝယ်ယူစေရန်ကြိုးပမ်းသည့်အခါထို့အပြင်, ငါတို့သည်သင်တို့၏အမည်, ငွေတောင်းခံလိပ်စာ, ရေကြောင်းလိပ်စာ, ခရက်ဒစ်ကဒ်နံပါတ်တွေ, အီးမေးလ်လိပ်စာနှင့်ဖုန်းနံပါတ်အပါအဝင်ငွေပေးချေမှုသတင်းအချက်အလက်အပါအဝင်သင့်ထံမှအချို့သောသတင်းအချက်အလက်စုဆောင်းပါ။ ကြှနျုပျတို့သညျ "အမိန့်ပြန်ကြားရေး" အဖြစ်ဤအချက်အလက်ကိုးကားပါ။
- အလားအလာအန္တရာယ်သို့မဟုတ်လိမ်လည်မှုဘို့ငါတို့အမိန့် Screen;
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ငါတို့သည်လည်းကျနော်တို့ခံယူတဲ့ဆင့်ခေါ်စာ, ရှာရမ်းသို့မဟုတ်သတင်းအချက်အလက်အခြားအရာကိုပြုသင့်သည်တောင်းဆိုမှုများကိုတုံ့ပြန်ရန်, ဒါမှမဟုတ်မဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခွင့်အရေးကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရန်, တည်ဆဲဥပဒေများနှင့်စည်းမျဉ်းများလိုက်နာရန်သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာသတင်းအချက်အလက်များမျှဝေနိုင်ပါသည်။
ဆိုက်ဟောင်းကို 18 နှစ်ပေါင်းနှစ်အောက်တစ်ဦးချင်းစီအတွက်ရည်ရွယ်သည်မဟုတ်
ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့စည်းကမ်းချက်များအလေ့အကျင့်နှင့် ပတ်သက်. ပိုမိုသိရှိလိုပါက, သင်မေးခွန်းများကိုရှိသည်, ဒါမှမဟုတ်သင်တိုင်ကြားချက်လုပ်ချင်ပါတယ်လျှင်အောက်တွင်ပေးထားသောအသေးစိတျကို အသုံးပြု. support@buddhatrends.com မှာသို့မဟုတ် mail ဖြင့် E-mail ဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကို ကျေးဇူးပြု. ဆက်သွယ်ပါလျှင်:
5900, rue de Verdun Montreal ကွိဘက်, CA H4H 1M4